‘र्‍यापिड परीक्षणमा संक्रमण देखियो भन्दैमा आत्तिनु र दौडाइहाल्नु पर्दैन’ « Mechipost.com
प्रकाशित मिति: ३ बैशाख २०७७, बुधबार २१:४६
र्‍यापिड टेस्टमा राजधानी काठमाडौंमा पनि कोरोनाभाइरस संक्रमणको पोजेटिभ नतिजा आउन थालेको छ । यसले मानिसहरुमा एक किसिमको त्रास र भयको स्थिति पैदा भएको छ । आखिरमा यो र्‍यापिड टेस्ट भनेको के हो ? कसरी काम गर्छ यसले ? के यो टेस्टमा पोजेटिभ नतिजा आउनेबित्तिकै त्यो व्यक्तिलाई कोरोनाले संक्रमण गरेको हो भनेर मान्न सकिन्छ ? यिनै सवालहरुको सेरोफेरोमा रहेर शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुनसँग रातोपाटीका लागि माया श्रेष्ठले गरेका कुराकानीः
र्‍यपिड टेष्टको क्षमता कम्पनी अनुसार हुन्छ । कुनै र्‍यापिड टेस्टले ७० प्रतिशत त कुनै र्‍यापिड टेस्टले ५० प्रतिशतसम्म काम गर्न सक्छ । यसले कहिलेकाहि पोजेटिभ केशलाई नेगटिभ अर्थात फरक–फरक देखाउन पनि सक्छ । अर्थात् यो टेस्टले देखाउने नतिजा कहिलेकाहीँ फल्स पनि हुन सक्छ ।
र्हो र्‍यापिड टेस्टले नेगेटिभ र पोजेटिभ देखाएका केसलाई पीसीआर टेष्ट गर्दा त्यही नदेखाएर उल्टो नतिजा पनि देखाउन सक्छ । ५–६ महिना अघि संक्रमण भएर निको भइसकेपछि पनि र्‍यापिड टेस्टले पोजेटिभ देखाउन सक्छ, अर्थात् यसलाई पास्ट इन्फेन्सन भनेर देखाउँछ । शरीरमा भाइरस छ कि छैन् भनेर प्रारम्भिक चरणमा जाँच्ने सन्दर्भम र्‍यापिड टेस्टले भाइरस संक्रमण भएको देखाउने सम्भावना कम हुन्छ । शुरुवाती अवस्थामा र्‍यापिड टेस्टले धेरै पिकअप गर्ने सम्भावना न्युन हुन्छ । आरटी पिसिआरमा भने त्यसको ठिक उल्टो हुन्छ । आरटी पिसिआरले भने जति समय घर्किँदै जान्छ, त्यति नै देखाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।
यसको अर्थ के हो भने परीक्षण गरिएका झण्डै १ सय जना मध्ये तीसजनाको रिजल्ट फल्स देखाउन सक्छ । यसमा व्यक्तिको शरीरमा भाइरसको लोड कति छ, स्याम्पल लिँदा कसरी लिइयो, नमुना स्याम्पललाई परीक्षण गर्ने स्थानसम्म कसरी पुर्याइयो जस्ता पक्षहरुले पनि भूमिका खेल्छ । त्यसैगरी, पीसीआर गर्दा कहिलेकाहीँ प्राविधि गल्ती पनि हुन सक्छ । यी सबै कुराले अन्तिम रिजल्ट आउँदा ठुलो प्रभाव पर्छ ।
यी सबै कुरा मिल्यो भने रिजल्ट सही आयो । स्याम्पल परीक्षण गर्दा १०० प्रतिशत पुर्णरुपमा प्रक्रिया पु¥याए काम गरेको खण्डमा पनि ६७ देखि ७० प्रतिशत मात्रै सही रिजल्ट आउँछ । त्यसैले यसको ७० प्रतिशत पत्ता लगाउने क्षमता भएको अनुसन्धानहरुले देखाएको छ । नियमहरु पालना नगरेको खण्डमा त्यो भन्दा पनि कम प्रतिशतको रुपमा रिजल्ट आउन सक्छ ।
र्‍यापिड टेस्ट नयाँ संक्रमित पत्ता लगाउन भन्दा पनि कुनै मानिस कोरोनाबाट संक्रमित भएको थियो कि थिएन भनेर छुट्याउन बढी काम लाग्छ, यसले भरपर्दो ढंगले नयाँ कोरोना रोगी पत्ता लगाउँछ भनेर ढुक्क भएर भन्न मिल्दैन भनेर कतिपय जनस्वास्थ्य विदहरुले भन्नुहुन्छ । यसबारेमा अलि प्रष्ट पारिदिनु न ?
कुनै एउटा गाउँ पिसिआर गर्ने सम्भव छैन । त्यो गाउँमा कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट मानिस आएका छन् । कोरोनाको आशंका गरिएको छ । त्यस गाउँमा कोरोना संक्रमित छन् कि छैन् भनेर दोधार भएको अवस्थामा र्‍यापिडले धेरैलाई टेष्ट गर्न पाइयो । धेरै टेष्ट गर्दा एक दुई जनालाई देखियो भने यहाँ संक्रमण कुनै समयमा आएको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
यी दुवै कुनै पनि भाइरस वा किटाणुका विरुद्ध शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमताले पैदा गर्ने एन्टीबडी प्रोटिन हो । यी दुईमध्ये एउटा अलि छिटो देखिन्छ । किटाणु वा भाइरसले संक्रमण गरेको ५–७ दिनदेखि हप्ता १० दिन भित्रमा आइजीएम देखिन्छ । त्यो देखियो भने संक्रमणको चरणमा छ भन्ने हुन्छ । फेरि अर्को आईजीजीले चाहिँ कुनै समयमा संक्रमण भएको थियो भन्ने देखाउँछ ।
त्यस्तो एन्टीबडी भएको व्यक्तिलाई फेरि अर्को पटक कोरोनाभाइरसले संक्रमण गर्यो भने उसलाई त्यसले असर गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । किनभने उसको शरीरमा त्यसका विरुद्धमा पहिले पनि प्रतिरोधी क्षमता अर्थात् एन्टिबडी बनिसकेको हुन्छ, जसले उसलाई त्यो भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँछ । यो एन्टीबडी धेरै महिना वा वर्षौसम्म पनि रहन सक्छ । त्यसैर्ले यापिड परीक्षणमा आईजीजी देखियो भने ओहो यसलाई रोग लागेको रहेछ भनेर आत्तिनु र उपचारको लागि दौडाइहाल्नु पर्दैन ।
अमेरिका लगायतका अन्य ठाउँमा संक्रमित मान्छे उपचार पछि निको भएकाहरुको शरीरको त्यही एन्टीबडीको प्रयोग गरेर उपचार गर्ने अभ्यास शुर भएको छ । त्यसका लागि निको भएका व्यक्तिको रगतबाट निकालिएका प्लाज्मालाई शुद्धिकरण गरेर उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विशेष गरेर यसरी निकालिएका प्लाज्मा कोरोनाको संक्रमणले अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा पुगेका मानिसहरुको उपचारमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । (रातोपाटी डटकमबाट साभार)